प्रतिस्पर्धाको बजारबाट के पाठ सिक्यो सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले ? – Insurance Khabar
प्रतिस्पर्धाको बजारबाट के पाठ सिक्यो सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले ?
प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १०:५२
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४१ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा ६ करोड २३ लाख रुपैयाँले बढी हो । बजारमा बढेको प्रतिस्पर्धाबाट पाठ सिकेर कम्पनी अगाडी बढ्न खोजेको देखिन्छ। कम्पनीको जिबन बीमा कोषको आकार मजबुद बन्दै गएको छ, कम्पनीले जिबन बीमा कोषमा करिब ३ अर्ब ९० करोडको हाराहारीमा जम्मा गरिसकेको छ।
कम्पनीले ७० प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको तयारीमा रहेको छ, सो हकप्रद निस्कासन पछि कम्पनीको चुक्तापुंजी १ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमशिक अबधिमा कम्पनीले ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले लगानी कर्जा तथा अन्यवाट १० करोड रुपैयाँ र बीमालेख धितोमा २७ करोड २८ लाख रुपैयाँ लगानी गरी ६३ लाख रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरेको हो । कम्पनीको दिर्घकालिन लगानी तथा कर्जा २ अर्ब ९० करोड हाराहारीमा पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमशिकमा कम्पनीले ६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यस अवधिमा कम्पनीले ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ३६ पैसा, प्रति शेयर नेटवर्थ १३९ रुपैयाँ ८१ पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात २३.७० गुणा बढी छ । कम्पनीले बिमांकीय मूल्याङन र सो पश्चात् हुन आउने नाफाले प्रती शेयर आम्दानी तथा नेर्टवर्थमा परिर्वतन हुनसक्ने जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले ३८० कुल दाबीका लागि ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने २३१ दावी वापत एक करोड २१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
कम्पनीकोजगेडा कोष तुलात्नामक रुपमा आकर्षक रहेको छ, कम्पनीले जगेडा कोषमा ३९ करोड ९ लाख रुपैयाँ, जीवन बीमा कोषमा ३८ करोड ९२ लाख र महाविपत्ति जगेडा कोषमा ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ संचित गरेको छ । कम्पनीले सार्बजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले बजारको अवस्था अनुसारको रणनीति बनाएर अगाडी बढेको खण्डमा बजारबाट फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ ।